Nayakhabar.com: विश्वभर दिपावलीको प्रभावः ओबामालाई समेत लाग्छ तिहार ! कुन कुन देशमा कसरी मनाइन्छ दिपावली ?
विश्वभर दिपावलीको प्रभावः ओबामालाई समेत लाग्छ तिहार ! कुन कुन देशमा कसरी मनाइन्छ दिपावली ?
काठमाडौं । तिहार नेपालका हिन्दुहरुको दोस्रो ठूलो चाड हो । दशैंपछि लगत्तै आउने यो चाड पाँच दिनसम्म मनाइन्छ । तर, नेपाल र भारतमा मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न देशमा आआफ्नो तरिकाले तिहार मनाइन्छ । कुन देशमा कसरी मनाइन्छ तिहार ? पढ्नुहोस् एक रिपोर्टः
मलेसियामा भारतीय उपमहाद्विपको परम्पराअनुसार दिपावली मनाइन्छ । यस अवसरमा मलेशियाई हिन्दू ९तमिल, तेलुगु र मलयाली० ले ओपन हाउसेस आयोजना गर्छन्, जसमा भोजनका लागि आफ्नो घरमा फरक९ फरक जाति तथा धर्माबलम्बीहरुलाई स्वागत गरिन्छ ।
सिंगापुरमा रहेका हिन्दुहरुका लागि दिपावली एक वाषिर्क उत्सव हो । यहाँ अल्पसंख्यक भारतीय समुदाय ले यसलाई मुख्यरुपमा मनाउँछन् । सिंगापुरमा दिपावलीमा यहाँ सार्वजनिक विदा दिइन्छ । सिंगापुर प्रहरीमा रहेका नेपालीहरुले पनि तिहार बनाउँछन् ।
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा दिपावलीलाई भारतीय मूलका व्यक्ति तथा स्थानीयवासी मिलेर सार्वजनिक रुपमा मनाउँछन् । सेलिब्रेट इन्डिया इ९कर्पोरेसनले सन् २००६ मा मेलबोर्नमा प्रतिष्ठित फेडरेसन स्क्वायरमा दीपावली समारोह सुरु गरेको थियो ।
यहाँ तमिल समुदायले दिपावली मनाउने गर्छन् । यस दिन बिहान तेलले स्नान गरेर नयाँ लुगा लगाउने, एक९अर्कालाई उपहार दिने, मन्दिरमा गएर पुजा गर्ने गरिन्छ ।